CTC-19 : misokatra ny ivontoerana hitsaboana ireo mararin’ny Coronavirus eto Antsirabe - Angisy
Home » CTC-19 : misokatra ny ivontoerana hitsaboana ireo mararin’ny Coronavirus eto Antsirabe
CTC-19 : misokatra ny ivontoerana hitsaboana ireo mararin’ny Coronavirus eto Antsirabe
Nanokatra sy nitsidika ny toerana ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Sary: ©Zoll Rabe
Miakatra hatrany ny isan’ireo tsaboina amin’ireo hopitaly mandray ny mararin’ny Covid19 eto Vakinankaratra. Antony nahatonga ny fitondram-panjakana hanokatra ivontoeram-pitsaboana manokana eto Antsirabe.
Nosokafana ny talata 4 may 2021 ny ivontoeram-pitsaboana ireo mararin’ny COVID-19. Ny gymnase lehibe eo amin’ny Piste Vatofotsy no navadika ho toeram-pitsaboana. Mahazaka marary 120 ny ivontoerana. Tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Novatsiana concentrateurs d’oxygène miisa 90 ny CTC Antsirabe. Nambaran’ny Filoha fa « tsy maintsy hifarana ny ady, ny tanjona kosa dia mba ho vitsy ny lavo ». Nitondra ny fanampiana Tohan’aina ho an’ireo marary horaisina eto amin’ity toerana ity ihany koa ny Filoha tamin’izany fahatongavany izany, ankoatr’ireo CVO Plus natokana ho fiarovana ireo mpiasan’ny fahasalamana. Nampanantena ny Filoha fa homena tambin-karama manokana avokoa ireo mpiasan’ny fahasalamana rehetra miantsehatra amin’ny ady amin’ny Covid19. Efa nisy ny toromarika manokana nomena ny tomponandraikitra mahakasika izany raha ny fanazavany.
Feno ny hopitaly
Miha-miakatra hatrany ny isan’ireo mararin’ny coronavirus eto Antsirabe. Efa nisy fotoana tafakatra 75 ireo marary noraisin’ny Hopitaly Atsimo raha toa ka 69 ny fahafaha-mandray. Efa manomboka tsy maharaka toy izany ihany koa ireo hopitaly tsy miankina mandray mararin’ny covid eto andrenivohitr’i Vakinankaratra. Raha ny antontan’isa tamin’ity andro nanokafana ity ivon-toerana ity manokana dia fantatra fa 57 ireo voamarina vaovao fa mitondra ny tsimokaretina ho an’ny faritra, 5 tsaboina any amin’ny hopitaly ary manaraka fitsaboana any an-tranony ny 52. Miisa 1014 kosa ireo nahitana soritraretina ary mahatratra 1024 ireo olona arahi-maso nifanerasera tamin’izy ireo. I Vakinankaratra izay iray amin’ireo faritra vaovao nandraisana ny fepetra fanakatonana ny fifaneraserana amin’ireo faritra hafa.
Mila miomana sahady amin’ny fidirana amin’ny vanim-potoanan’ny ririnina ihany koa ny eto Antsirabe izay isan’ireo faritra mangatsiaka indrindra eto Madagasikara hoy ny Talem-paritry ny fahasalamana, ny dokotera Rabenirina Mamitiana Pierre, io vanim-potoana io izay mamparefo ny hery fiarovan’ny maro raha ny nambarany. Etsy ankilany, tsy maintsy mivonona ihany koa ny amin’ny fandraisana ireo mpanao vary avy eto Vakinankaratra lasa niasa any amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny faritra, hoy hatrany ny fanazavany.
Ireo marary tsy ahitana fahasemporana be loatra no horaisin’ny CTC Antsirabe raha hatokana kosa ho an’ireo tratry ny fahasemporana mahery vaika ny Hopitaly Atsimo. 51 ny isan’ireo olona hampiodina ity ivontoeram-pitsaboana manokana eto Vatofotsy ity, izay ahitana mpiasan’ny fahasalama sy mpitandro filaminana ary mpiasan’ny Jirama miasa 24 ora amin’ny 24 ora. Manana famokarana herinaratra mahaleo tena ny ivon-toerana hisorohana ny fahatapahan-jiro.